ချစ်ကြည်အေး: ဘာလီ ခရီးစဉ်-၅
ဒီနေ့တော့ တရက်ခရီးစဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံး ၂ခု ဖြစ်တဲ့ ဥလုဝပ်တူး တန်ပယ် (Uluwatu Temple) နဲ့ ဂျင်ဘဲရမ် ပင်လယ်စာ (Jimbaran Sea Foods) စားသောက်ဆိုင်ကို သွားတဲ့အပိုင်း ပြောချင်ပါတယ်။
Ulu ဆိုတာ Head/Land's end ၊ Watu ဆိုတာက Stone/Rock လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ "ကုန်းမြေရဲ့ အဆုံးစွန် ကျောက်ကမ်းပါး" လို့ ကျမက ဘာသာပြန်ပါမယ်။ ကိုယ် ပြန်ချင်သလို လွတ်လပ်စွာ ပြန်လို့ရပါ တယ်။ "ကျောက်တုံးဂတုံး" လို့ ပြန်ချင်လည်း ပြန်လို့ရပါတယ်။
အားလုံး ပြေပြေလည်လည်ပေါ့.....။ ဘာလီရဲ့ နာမည် အကြီးဆုံး ဟင်ဒူ ဘုရားကျောင်း ကြီးပါ။ အဲဒီနေရာဟာ နေဝင်ချိန် ကြည့်ကြဖို့ တူးရစ် တွေ အများဆုံး သွားကြတဲ့နေရာပေါ့။
ဝင်ခ ပေးရပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ တရက်ခရီးအတွက် ပေးရတဲ့အထဲမှာ ပါပြီး သားပါ။
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေ အတို ဝတ်လာရင် အခုလို ခါးပတ်ဖို့ အဝတ်တထည် နဲ့ ခါးစည်းကြိုး ပေးပါတယ်။ အရှည်ဝတ်ထားတဲ့ သူတွေ ကိုတော့ ခါးစည်းကြိုး တချောင်းပဲ ပေးပါတယ်။ ခါးစည်း မဖြစ်မနေ စည်းကို စည်းရပါတယ်။ ခါးမရှိတဲ့ သူတွေ၊ ခါးပျောက်နေ တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အလွန် အခက်ပွေရတဲ့ နေရာပေါ့။ အို...ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်းမှန်းပြီး စည်းလိုက်ကြတာပေါ့။
ဘယ်သူပြောလဲ...မင်းနဲ့တို့ဟာ ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ကောင်းကင်ပြာလို ဘယ်တော့မှ မဆုံနိူင်တဲ့ ဘဝတွေပါ လို့....
ဒီမယ်...ဟိုးအဆုံးမှာ သူတို့ ပွေ့ဖက် ထိနမ်းလို့......(ကဗျာဆန်ပုံ...ကဗျာဆန်လိုက်ပုံ.....း)
သိတ်လှတဲ့ Cliff က ဘာလီရဲ့ တောင်-မြောက် တန်းနေပြီး အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာဘက် မျက်နှာဖွင့်ထားပါတယ်....
ဘုရားကျောင်းက တောင်ဘက်ခြမ်းအပေါ်မှာ ဆောက်ထားပြီး ဝတ်ပြုရှိခိုးမဲ့သူများပဲ ဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်...
ဒါက တောင်ဘက်ကကြည့်ရင် တွေ့ရမဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းCliff ပေါ့....
အပေါ်ပုံနဲ့ အောက်ပုံကို ယှဉ်ကြည့်ရင် Cliff ပဲသက်သက်နဲ့၊ ပန်းခရမ်းပြာလေးတွေနဲ့ တွဲပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ ၂မျိုး ရိုက်ထားခဲ့တာပါ။
ကျမရဲ့ ဓါတ်ပုံပညာစွမ်း ဆိုပါတော့.......
ယှဉ်ကြည့်ပါ၊ မမြင် မြင်အောင်ကြည့်ပါ...ဇွတ်ပဲ...တိုက်တွန်းပါတယ်...
ဒါကတော့ မြောက်ဘက်က ကြည့်ရင် တွေ့ရမဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းCliff ပါ
ပုံသေးလေး ၂ခုက ညစာ စားခဲ့တဲ့ ဂျင်ဘယ်ရမ် ကမ်းခြေပါ။ စားပွဲတွေကို ကမ်းခြေဘက် မျက်နှာမူပြီး လှိုင်းဖြူဖြူတွေနဲ့ အနီးဆုံး သဲပြင်ပေါ်မှာ ကန်ဒယ်လိုက်-မီးအိမ်လေး ၂လုံးနဲ့ ခင်းကျင်းထားပါတယ်။ အလွန်တရာမက နှစ်ရာ သုံးရာ လောက်ကို ရိုမန်တစ်ပါတယ်။ ရိုးရာတီးဝိုင်းလေးက စားပွဲတိုင်းဆီကို လိုက်ပြီး ဖြေဖျော်သေးတယ်။ သူတို့က စားပွဲတခု ရှေ့ရောက်တိုင်း နှုတ်ဆက်ပြီး ဘယ်ကလာပါ သလဲ မေးပါတယ်။ ကိုရီးယားကဆို ကိုရီးယားသီချင်း၊ ဂျပန်ကဆို ဂျပန်သီချင်း၊ အမယ်...အိန္ဒိယသီချင်းတောင်ပါသေး...
အေးလေ...ရပါတယ် လာထားပေါ့...။ ကျမတို့ကို မေးတော့ ကျမက စလုံးက လာတာလို့ ဆိုလိုက်တယ်...အိုခေပေါ့၊ ဒါနဲ့ ဆိုမလို့ ပျိုးတုန်းမှာ ကျမက Hold on ! ဒါပေမဲ့ ငါတို့က မြန်မာလူမျိုးဟ၊ မြန်မာသီချင်းလေး တပုဒ်လောက် လုပ်စမ်းပါ လို့ အေးဆေးလေးပဲ သီချင်း တောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ မျက်နှာကို သေချာ မကြည့်ပဲ အပီယူပြီး နားထောင်တော့ မဲ့ပုံနဲ့ မျက်လုံး မျက်တောင် လေးတောင် မှေးစင်းထားလိုက်သေးတယ်....။
သူတို့ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ကြ၊ ခေါင်းကုတ်ကြ နဲ့ တော်တော်လေး စားသွား တယ်၊ အဲသလို သူတို့ မြွေဖမ်းနေတာ ရယ်ချင်လွန်းလို့ မနဲ အောင့်ထားရတယ်။ မှတ်ပလား...လွယ်လွယ်နဲ့ မရတာ...အဲဒါ တို့ မြန်မာ...
ဓါတ်ပုံတွေ ပုံထွက် သိတ်မကောင်းဘူးနော်၊ သတိထားမိကြတယ် မဟုတ်လား။ ပြန်စဉ်းစားတိုင်း စိတ်မကောင်းဘူး၊ မနက်ကနေ တနေ့လုံး ရိုက်လာလိုက်၊ ရိုက်ပြီးသမျှလေး တပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်ဗျူးလိုက်နဲ့ တကယ် ရိုက်ရမဲ့နေရာ ရောက်ပြီဟဲ့လည်းဆိုရော ကိုရွှေဘက်ထရီလေးက ပြားသွားရော...။ တကယ်ပါ ထိုင် ငိုချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ်။ ပိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပုံကောင်းလေးတွေ ရိုက်မပြနိူင် ဖြစ်ရပါပြီ ဆိုပြီးတော့...။
အားမလျှော့ပါဘူး လာထား ပန်းသီးလည်းမဟုတ်၊ လိမ္မော်သီးလည်း မဟုတ်၊ အိုင်လို့လည်း မအော်တတ်တဲ့ ကျမရဲ့ ကိုယ်ခေါ်သူကြား သူခေါ်ကိုယ်ကြား ဖုန်းကလေးနဲ့ ပိတ် ရိုက်ပစ်ခဲ့ရတာ...အေးလေ...ရောင့်ရဲတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ...
သင်ခန်းစာ : ခရီးသွားတိုင်း ကင်မလာ ဘက်ထရီ အပိုတခု ဆောင်သွားရန်
တရက် ခရီးရဲ့ မနက်ခင်း ကျန်ပါသေးတယ်...ကျမက ဟိုဒီ တစစီဆွဲပြီး ရေးနေတာမို့ပါ၊ နောက်ပိုစ့်တွေ မကြာမီ လာမည်...
ဒဏ္ဍာရီ Mon Apr 05, 03:42:00 PM GMT+8
မမရေ........ အပေါ်က နေ၀င်ချိန်လေးကို သွားကြည့်ရတဲ့ အရသာနဲ့ ဗဟုသုတလေး မှတ်သားသွားတယ်။ ခါးမပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်ရမယ်..း))
ဟုတ်တယ်နော်.. ပင်လယ်ပြင်နဲ့ ကောင်းကင်ပြာက တနေရာရာမှာ ထိစက်နေသလိုပဲ.. ရိုက်ချက်တွေ ကောင်းမှကောင်း။ တွေ့ပါတယ် မမရဲ့ ပန်းခရမ်းပြာလေးတွေနဲ့ ကမ်းပါးလေး လှမှလှ ကဗျာဆန်ဆန်ပေ့ါ။
အဲ.....ညဘက် စားစရာတွေ ရိုက်မှပဲ မှောင်တော့တယ်..။ မမြင်ရတဲ့ စားစရာတွေကို မျှော်သွားတယ်။း))
မှတ်သားသွားပါ့မယ်.. ခရီးသွားရင် ဘက်ထရီ အပိုဆောင်ဖို့။ ကျေးဇူး
Rita Mon Apr 05, 05:24:00 PM GMT+8
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Mon Apr 05, 06:36:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး Mon Apr 05, 07:20:00 PM GMT+8
ညီမ ဒန်ဒန်ရေ ကော်မန့် အရှည်ကြီး အတွက် ကျေးဇူးပါ..ပိုချစ်သွားပြီ...:)
ညီမ ရီတာလေး...ဟား ဟား ထီပေါက်ဖို့ မလိုပါဘူး ညီမရယ် ဘာလီက ဈေးမကြီးပါဘူး ....:)
ကိုကြီးကျောက်...ဆိုးတယ်ဗျာ...ကိုယ့်နှမ လက်ရာ အစစ် အစစ်ဗျာ ...ယုံလိုက်စမ်းပါ....:)
ဇွန်မိုးစက် Mon Apr 05, 08:45:00 PM GMT+8
ပုံတွေ အရမ်းလှတယ် အစ်မရေ။ ဘာလီသွားချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ။ ကမ်းခြေမှာ ညစာစားချင်တယ်။
သက်ဝေ Mon Apr 05, 09:51:00 PM GMT+8
ဓါတ်ပုံတွေ အရမ်းကာရော မဟားဒယား လှပါသည်...။
TZA Mon Apr 05, 10:55:00 PM GMT+8
မိုးကောင်းကင်အရောင်က အရမ်းလှတယ်ဗျာ၊ အသည်းကွဲနေရင်တောင် ပြန်ဆက်သွားမယ့် အနေအထားရှိတယ်။
TZA Mon Apr 05, 10:57:00 PM GMT+8
SHWE ZIN U Tue Apr 06, 01:09:00 AM GMT+8
ပြောချင်တာတွေ အားလုံး အကုန်လုံးပြောသွားကြပြီ သူများပြောဘို့ ချန်ကြတော့ဘူး.. အဟွန်း ဆိုးတယ်..
ကိုဇော် Tue Apr 06, 02:31:00 AM GMT+8
သြော်...အဲဒီအချိန်မှာ အမ ကျနော့်ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး ကြိုးကို ခါးပျောက်နေလို့ ဘယ်နေရာမှာ ချည်ရမလဲလို့ မေးတာ ဒါလား..။ ခါးပျောက်နေတယ် ဆိုပြီး ခါးလို သိမ်နေတာ တစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ် လည်ပင်း ဆိုပြီး ချည်မလို့ . .ချည်မလို့. . .သူ . .. သူ . . မနည်းတားရတယ်။ မလုပ်ပါနဲ့ အမရယ် အမလူကြီး စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေ အဆုံးသတ်သွားပါဦးမယ်...လို့. . .
ကျနော်လည်း ကောင်းကင်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးလိုပဲ သူနဲ့ကျနော် .....ပွေ့ဖက်ချင်လိုက်တာဂျာ..အဟိး
ကျနော်ပိုပြီး ကဗျာ ဆန်သွားပြီနော်..
( ကိုဇော် မင်း ပိုင်သကွာ )
အမပြောတဲ့ ခရမ်းပြာပန်းနဲ့ ပုံလေးတွေကို ယှဉ်ကြည့်တယ်. . မရဘူး. .ထပ်ယှဉ်ကြည့်တယ်. . ထပ်မရဘူး. . ဟုတ်တာပေါ့. .သူတို့က အပေါ်အောက် ဖြစ်နေတာကိုး. .ဘေးတိုက်မှ မဟုတ်တာ...
သူတို့ သီချင်း မရတာ မဟုတ်ဘူးနော်..
များနေလို့ ရွေးနေတာ ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရာတကာ ဆိုတဲ့ သီချင်းဆိုလိုက် ပြီးရော. . .
“ မြနန္ဒာ. . . .ဘာညာသရကာ နေကြာ ကွာစေ့. . ”
ကင်မလာလေးအတွက် ဘတ်ထရီအပို ဆောင်ချင် တာတောင်မှ ကင်မလာက မချိ. .တနားလိုက်တာနော်... ကိုယ့်ကိုယ်ကို....
( ကိုဇော် မင်း မွဲသကွာ )
Unknown Tue Apr 06, 04:11:00 AM GMT+8
စောနက စီဘုံးမှာ လာအော်တာက အလည်လာတာ။ ခုဟာက စာလာဖတ်တာ။ အဟဲ.. ဓါတ်ပုံတွေအရမ်းမိုက်တယ်။ ပို့ပေးနော် မမ။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက် ဟမ်းနီးမွန်းလဲဆိုတော့ ငြင်းချင်သေးတယ်။ ပြီးတော့ကျတော့ ရိုမန်တစ်နှစ်ရာသုံးရာတောင် ဆန်လိုက်သေး..ဟေးဟေး
Thant Tue Apr 06, 09:21:00 AM GMT+8
ခရမ်းရောင်ဓာတ်ပုံလေးတွေ သိပ်လှတာပဲ...... သွားချင်လိုက်တာ...
~ဏီလင်းညို~ Tue Apr 06, 10:30:00 AM GMT+8
ဓာတ်ဓာတ်ပုံလေးဒွေ ကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးအညားဂျီးတင်တယ်...း))
အင်ကြင်းသန့် Tue Apr 06, 11:54:00 AM GMT+8
မမရေ...တကယ်ပြောတာပါ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး တစ်ခေါက်တစ်ခါ သွားချင်စိတ် ပေါ်မိတယ်...မျှဝေပေးတဲ့ င့ါအစ်မကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
H Tue Apr 06, 01:16:00 PM GMT+8
Good photo,ပုံတွေကိုချစ်တယ်..... :)
rose of sharon Tue Apr 06, 02:33:00 PM GMT+8
ဓာတ်ပုံရိုက်တော်တယ်... ပင်လယ်နဲ့တိမ်တွေကိုကြည့်ပြီး ဘာကိုမှန်းမသိ အရမ်းလွမ်းသွားတယ်...
မြသွေးနီ Tue Apr 06, 02:48:00 PM GMT+8
နောက်ဆို ရီချာခ်လုပ်လို့ရတဲ့ ဘက်ထရီခြောက်ဆောင်ထားလေ။ သူက သွားတဲ့နေရာမှာ ချာခ်ျဂျဘယ်လုပ်လို့ရတယ်။
စန္ဒကူး Tue Apr 06, 05:28:00 PM GMT+8
ကူးကူး ဒီအပတ်ထဲသွားမှာ.. သွားရမှာစိတ်ထဲပျင်းနေတာ..
လုလု Wed Apr 07, 09:28:00 AM GMT+8
ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အလည်သွားချင်မိတယ်။း) ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Thu Apr 08, 11:02:00 AM GMT+8
mks Sat Apr 10, 04:23:00 PM GMT+8
ဘာလီ ဓါတ်ပုံတွေ ငေးသွားပါတယ်